फुर्के नम्बर १ को "मायाले संसार थाम्दैन '' यसरी जन्मियो : विल्सन विक्रम राई - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२३ कार्तिक २०७४, बिहीबार १८:०८
हाँस्यकलाकार तक्मे बुढा उर्फ विल्सन विक्रम राई यति फेरि एक पटक ‘मायाले संसार थाम्दैन’बाट चर्चामा आएका छन् । मेरी बास्सैबाट तक्मे बुढा बनेर लोकप्रिय बनेका राई त्यसपछि देशविदेशका कार्यक्रम , सिनेमा र म्युजिक भिडियोमा बाक्लैरुपमा जम्न पनि सफल भए । यहाँसम्म की उनको वास्तविक परिचय भन्दा पनि तक्मे बुढाले नै उनी धेरै चिनिन थाले र चिनिन्छन् पनि । उनले सिनेमा , टेलिफिल्ममा , म्युजिक भिडियोमा अनेक पात्र र स्वरुपमा देखिने काम गरे तर तक्मेले जतिको कुनैले पनि सफलता दिएन । तर पछिल्लो समयमा उनले युट्युबको लागि तयार गरेको हास्य टेलिसिरियलबाट चर्चामा आएका छन् । उनले प्रयोग गरेको थेगो मायाले संसार थाम्दैन यति लोकप्रिय र जनजिब्रोमा झुण्डिन सफल भएको छ की छोटो समयमै ट्रकका पछाडि , फेसबुकका वालमा छ्याप छ्याप्ती लेखिएको पढ्न पाइन्छ । पुर्वी नेपालको झापामा नै सम्पुर्ण छायांकन हुने उनको फुर्के नम्बर १ हास्य टेलिसिरियललाई दर्शकले रुचाएका कारण विल्सनले फेरि एउटा नयाँ नाम पाएको छ फुर्केे । तिनै फुर्के उर्फ विल्सन विक्रम राईसंग सहकर्मी प्रभात लामाले आजको गफगाफ गरेका छन् ।
“फुर्के नम्बर १”भनेको खासमा यो के हो?
फुर्के नम्बर १ मैले खासमा एक दुई भागको लागि मात्र बनाएको हो । यसको कथा चाही कसरी जन्मीयो भन्नुहोला । अलिक अगाडि पुर्व सन्चारमन्त्री राम कार्की संगको भेटघाट हुदाँ उहाँले एक दुईवटा कथा छ । म तपाईलाई दिन्छु भन्नुभयो । मलाई यही क्रममा उहाँले चुनावमा हारेको वडा अध्यक्षको कथा भन्नुभयो । त्यो कथालाई समेटेर मैले सुरुको भागमा राखेँ । हुन त मैले त्यो कथालाई समेटेर छोटो सिनेमा बनाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ । तर मैले जे पर्ला पर्ला भनेर २ भाग गरेर फुर्के नम्बर १ बनाएँ । पछि कस्तो भई दियो भने एकदमै रुचाईयो । हुनत मन्त्रीज्यूले दुई भागको कथा दिनुभएको थियो । त्यो दुई वटा हाली हालेँ । पछि कमेन्टमा मलाई अर्को कहिले आउँछ भन्ने खालको कमेन्ट आउन थाल्यो । एक हिसाबले म चाँहि प्रश्नमा घेरिए । यसपछि मैले फुर्के नम्बर १ बनाउन लागेँ । यो चाँही गाउँतिरको फुर्के टाइपको मान्छे जो फुर्केको कुरा लुकाउन सक्दैन र अरुले ऊ फुर्केको देखेर रमाइलो मान्छन् । त्यस्तै मान्छेको सामान्य रमाइलो कथा हो फुर्के नम्बर १ ।
अहिलेका यो हिट थेगो ‘मायाले संसार थाम्दैन’ पनि उहाँले नै दिनुभएको थियो कि अरु कतैबाट आएको थियो?
यो थेगो अर्को एक जना वडा अध्यक्षले दिनुभएको हो । यसको पनि एकदमै रमाइलो प्रसंग छ । कुरा के हो भने हामी चैनपुर गएको थियौ । त्यहाँ जादाँ एक जना वडा अध्यक्ष आउनुभयो । उहाँको चाही बोली पिच्छे मायाले संसार थाम्दैन भन्ने बानी रहेछ । कस्तो भने उहाँले हामीसंग गफ गर्दा यसरी बोल्नुभयो :‘ के गर्नु अब म बडा अध्यक्ष । तर, पनि म आफै यो वडा सफा गर्छु । आफै कुचो लगाउँछु । के गर्नु आफ्नै मान्छेहरु फोहोर बनाई दिन्छन । आफ्ना भनेर के गर्नु ? मायाले संसार थाम्दैन ।’ उहाँले कुराकानीको क्रममा बारम्बार प्रयोग गरेपछि मलाई रमाइलो लाग्यो र ट्याप्प टिपेर फुर्के नम्बर १ मा हालेँ । मैले ‘मायाले संसार थाम्दैन ’भनेर तीन तरिकाले भने । यो थेगो चाहि लय हालेर लामो तरिकाले भन्ने स्टाइल चाही चल्यो । अहिले चाही यात्रा गर्दा वा कतै जाँदा अरुले भनेको सुन्दा मलाई अवार्ड नै पाएको जस्तो महसुस हुन्छ ।
“फुर्के नम्बर १” टेलिभिजनमा किन आएन?
मलाई खासै लेख्न पनि आउँदैन । मैले आफूले जानेको कुरा सोध्नु पर्ने हुन्छ केदार काकालाई (केदार घिमिरे माग्ने बुढा) । मैले उहाँको सल्लाह अनुसार शुरुवात गरेको हो । उहाँसंग के हो कुरा भनेर बुझ्नुपर्यो । टेलिभिजनमा गर्दा के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर म आफूले मात्र निर्णयले लिएर भएन । त्यही भएर टेलिभिजनमा चाहि भ्याउँदैन जस्तो लाग्यो । तर,यो २० , २१ भगमा पुगेपछि कुनै टेलिभिजनले लिने भयो भने चाहि केही सोंच्न सकिन्छ ।
टेलिभिजनबाट कुनै प्रस्तावहरु आएको छ कि छैन?
फुर्के नम्बर १ को दोस्रो एपिसोड जाने बितिक्कै मलाई प्रस्तावको लर्को नै लागेको थियो । प्रस्तावमा पनि के के कुरा हुन्छ नि । त्यसमा पनि कति कुरा मिल्ने , कति कुरा नमिल्ने खालका हुन्छन् । त्यही भएर तत्काल कसैसंग सहमती भइसकेको छैन । यो ढिलो छिटो टेलिभिजनमा आउने सम्भावना चाँही छ ।
तपाई ठूलो पर्दाको कलाकार , टेलिभिजनको कलाकार तर युट्युबको लागि किन कार्यक्रम बनाउदै हुनुहुन्छ ?
तपाईको यो प्रश्नमा मलाई के भन्नु छ भने कलाकार त जहाँको भए पनि कलाकार नै हो । कलाकारले कलालाई हेर्छ । फेरि अहिले त युट्युब भनेको विश्वब्यापी नै भइसकेको छ । हलिउड , बलिउड देखि लिएर संसारका मान्छेले युट्युबमा आफ्नो सिर्जना , कला सार्वजनीक गर्ने गर्छन् । तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ अहिले नेपाली सिनेमाको गीत संगीत हिट कति भयो भनेर मापन गर्ने मापक पनि युट्युबको भ्युज भएको छ । प्रचार प्रसार पनि युट्युब बाटै गर्ने गर्छन् । अहिलेको युट्युब भनेको ठ्याक्कै आज भन्दा १० वर्ष पहिलेको टेलिभिजनको क्रेज जस्तै हो । फेरि यहाँ आफ्ना दर्शकहरुको प्रतिकृया सिधै पाइन्छ । हरेकको मोबाइलमा पुग्छ । अनि यस्तो राम्रो प्लेटफर्म किन छाड्नु । फेरि कसैको करकापमा बनाउनु पर्दैन युट्युबको लागि निर्माण गर्दा । केबल दर्शक प्रति इमान्दार भए पुग्छ ।
फुर्के नम्बर १ को छाँयाकन प्रायः पुर्व मै हुने गर्छ । कारण के होे झापा मा नै छायांकन गर्नुको पछाडि ?
पुर्वमा छायांकन गर्दा मलाई दुई चार वटाको सहयोग मिल्छ । काठमाडौँमा चाही क्यामरालाई पनि घर घरले चिन्ने भईसक्यो । दर्शकको त कुरै छोड्नु । हामीलाई रुखहरुले पनि चिन्न थालिसकेका छन् (हासोँ) । कतै छाँयाकनका लागि गयो भने रुखले , ढुङ्गाले , बाटोले आपसमा कुरा गरेर भन्छन् होला ‘ त्यही पाँडे आएछ । यो तक्मेबुढा पनि यहाँ कति आउँदा रहेछन् ’ भन्छन । तर, झापामा के छ भने लोकेशन राम्रो छ । अर्गानिक कुरा देखाउन सकिन्छ । मैले यो सिरियलमा मोबाईल, फेसबुक र ईन्टरनेटको कुरा गरेको छैन । त्यो भन्दा अगाडीको धेरै कुरा हामीले बिर्सि सकेको छौ । मलाई लोकल लाग्ने चिजमात्र म प्रस्तुत गर्छु । मलाई लाग्छ छायाँकन गाँउतिर हुनुपर्छ जसले गर्दा विदेशमा हुने मान्छेलाई आफ्नो गाँउको याद आओस् । त्यसैको लागि मेरो फुर्के नम्बर १ को लोकेशन पुर्वको झापा नै भएको छ ।
फुर्के नम्बर १ मा तपाई र अरुण कार्की मात्र चिनिएको अनुहार हुनुहुन्छ । अब आउने भागहरुमा अरु चिनीएका कलाकारहरु आउने कतिको सम्भावना छ ?
अब चाहि चिनिएको एक दुई वटा अनुहार पनि आउँछ । म सोच्दै छु ।
तक्मे बूढालाई फुर्केको मायाले संसार थाम्दैनले बिर्साउन सक्ला त ?
बिर्साउन भने खै कुन्नी ? तर थेगो भने टिक्न सक्छ । अहिले हाम्रो छ भाग मात्र भयो फुर्के नम्बर १ को । यति छोटो समयमै तपाईले यो थेगोको फेसबुक स्टेटस र ट्रोलहरु धेरै बनेको पनि देख्न सक्नु हुन्छ । यसले मलाई उत्साहीत र खुशी चाही दिएको छ । तपाईले भन्नुभएको कुरामा चाही मेरो भनाई यस्तो छ । मैले अर्को सग दौडिएँ भने जित्न सक्छु होला । तर, मैले आफ्नो छायाँलाई जित्ने भने अलि गाह्रो नै हुन्छ ।
‘ड्रिम गर्ल’मा बाँधियो आकाश र आश्माको जोडी
निरमायाँ रोधि क्लवले दियो स्रष्टालाई रोयल्टी